Uber waxay horey u laheyd barnaamijkeeda madaxbanaan ee loogu talagalay Android Wear 2.0 | Androidsis
Uber waxay horey u laheyd barnaamijkeeda madaxa banaan ee loogu talagalay Android Wear 2.0
Haddii uu jiro magac lagu murmo markii la magacaabayo oo keliya ururka darawallada taksiilayaasha, kani waa Uber. Adeeg lagu daro kuwo kale oo badan intaas waxay ku fuuleen dhabarka tiknoolajiyada cusub in lagu kala baxo qaab qasan. Sida qaybaha kale ee nidaamka, adeegyada noocan ah ee ku saleysan tikniyoolajiyadda ayaa ka qaadanaya meel ka fog kuwa kale ee soo jireenka ah.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, Uber waa xaqiiqo wali ka jirta dalal badan haddana waxay yeelan doontaa boos u gaar ah oo ku yaal smartwatch-ka wata 'Android Wear 2.0'; mid ka mid ah kuwa LG Watch Sport iyo LG Watch Style ayaa ku habboonaan lahaa. The Barnaamijka kelida ah ee Uber Horeba waa xaqiiqo waxayna kuu ogolaaneysaa inaad codsato baabuur bilaa taleefan casri ah si aad si madaxbanaan ugu shaqeyso.
Abka ayaa mas'uul ka noqon doona helitaanka meelaha ugu sareeya ee tagaya guryaha iyo goobta shaqada. Xitaa waad hubin kartaa horumarka darawalka, waxaad isbarbar dhigi kartaa sicirka iyo heerka hada jira ama ETA, xitaa waxaad arki kartaa horumarkaaga si aad u gaarto goobta aad ku socoto waqtiga dhabta ah.
Sikastaba, waan ogahay waxaad ubaahantahay smartwatch leh Android Wear 2.0 ama sug kuwa hadda jira si ay u helaan cusbooneysiinta ugu dambeysa. Marka, haddii aad joogto ka tahay Uber, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad eegto LG Watch Sport iyo LG Watch Style, ama aad sugto inay Huawei soo bandhigto Huawei Watch 2 ee MWC. Android Wear 2.0, in kasta oo loo malaynayo inay tani noqon doonto kiiska markii la galayo daaqaddaas wearableyaal cusub oo ka imanaya shirkado kala duwan oo la xidhiidha Goole's OS wax laga beddelay ee saacadaha casriga ah.
Waxaad awoodi kartaa eeg liiska buuxa ee saacadaha casriga ah in heli doonaa Android Wear 2.0 usbuucyada soo socda sidaasna ku badbaadi dhawr euro haddii aad rabto inaad Uber ku haysato madax-bannaanidaas smartwatch lafteeda.
Uber - Eine Fahrt ugu fiican
Developer: Teknolojiyada Uber, Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Uber waxay horey u laheyd barnaamijkeeda madaxa banaan ee loogu talagalay Android Wear 2.0
Launcher-ka ugu fiican Android ee waqtiga oo dhan waxaa loo yaqaan Launcher LAB. Waxaan ku baraynaa sida loo isticmaalo si aad u abuurto Launcher-kaaga si buuxda u habboon